PCFS to UNHRC: hold Myanmar military junta accountable for bloody protest crackdown – People’s Coalition on Food Sovereignty
March 3, 2021 January 25, 2022
Previous Defy the military junta and defeat its fascist rule! Stand with the Burmese peoples! | အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံပြီးယင်းတို့၏ဖက်စစ်ဥပဒေများကိုကန့်ကွက်ရှုံ့ချလိုက်သည်။မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူအတူရပ်တည်သွားမည်။ Next Key message for SPEAK OUT! Farmers Building Just, Equitable, Healthy and Sustainable Food Systems in Asia